गंगादेब गाँउपालिका अध्यक्षलाइ सचेत यूवाको सुझाव सहित खुला पत्र: भने समिक्षा गर्नुस - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
गंगादेब गाँउपालिका अध्यक्षलाइ सचेत यूवाको सुझाव सहित खुला पत्र: भने समिक्षा गर्नुस
राजेन्द्र वली "राजु"
रोल्पा २०७८ बैशाख ८ गते बुधवार
गाँउपालिका अध्यक्ष ज्यू
गंगादेब गाँउपालिका रोल्पा
आजका मिति सम्म गाँउपालिका बाहिर रहदा अहिले सम्म आराम छु। गाँउपालिकामा हजुर बिराजमान हुनुभएको कुर्सि र पदिय दायित्व सघै आरामै हुनुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। म आज लेख्न मन नहुदा हुदै पनि गाँउ बस्ति बाहीरबाट हजुरलाइ सुझाव सहितको पत्र लेख्न बाध्य भएको छु। बिगत केहि बर्ष अगाडी पार्टी एकदमै अप्ठेरो परेको समयमा संगठनको जिम्मेवारी समाल्दै हाम्रो गाँउ गाँउमा आउदा हजुरलाइ बिरबहादुर खत्री भन्दा पनि क. अप्राजय को नामले परिचित हुनुहुन्थ्यो। म पनि कम्यूनिष्ट बिचारमा नै हुर्किएकोले कम्रेड भन्ने बित्तिकै अन्याय र अत्यचारको बिरुद्दमा लड्दै बिजय प्राप्त गर्ने योद्दाको रुपमा सम्झन्थे हजुरलाइ, नाम पनि क.अप्राजय नै छान्नु भएको थियो नि। हजुरलाइ बिरबहादुर खत्री भनेर त गाँउपालिकामा स्थानिय निकायको उमेदवारी दिए पश्चात बास्तबिक नाम थाहा पाएका थियौ।
तपाईंले राजनितीमा होमिदै गर्दा लामो समय जेल बस्नु पर्यो। जनयुद्धको परिणाम श्रीमतिलाइ गुमाउनु भयो र सहिद परिवार बन्नुभयो। दश बर्षे जनयूद्दमा अथाह मेहनत र शहिदहरुको रगतको परिणाम स्वरुप नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र सम्म हुदै मेरो गाँउलाइ संघियता सम्ममा डोर्याउन अथाह मेहनत गर्नुभयो। हालको माडि गाँउपालिकामा हाम्रो भूगोललाइ समेटी स्थानिय निकाएको संरचना निर्माणको प्रस्ताव गर्दा जिल्लामा निर्णय बिरुद्द अलग गाँउपालिकाको माग सहित आन्दोलनको नेतृत्व गरि सुकिदह गाँउपालिका बनाउन सफल हुनुभयो। यहाँ सम्मको मिहिनेतले तपाइलाइ केही गर्न सक्ने आशा सहित गाँउपालिका अध्यक्ष उमेदवारमा सक्दो नसक्दो मतदान गरीगराइ बिजय बनायौ।
गाँउपालिकामा अध्यक्ष पदमा बिजय भएको ६ महिना बित्न नपाउदै तपाइको कार्यकाललाइ आफै बिवादित बनाउने काम सुरु आफै गर्नुभयो। आफैले प्रस्ताब गरेको गाँउपालिका नाम सुकिदहलाई गंगादेव रुपान्तरण गर्नुभयो। आफैले प्रस्ताव गरेको सुकाओढार केन्द्रलाइ सानडाँडा प्रस्ताव मात्र नभएर दुइ तिहाइ बहुमत सहित एकै दिनमा पारित गराउनु भयो। मतदानमा बिजय प्राप्त गरि गाँउपालिकामा दुइ तिहाइको सरकार स्थापित हुदा के को डरले गुपचुपमा नाम र केन्द्र परिवर्तनको खेल खेल्नु भयो? आम छलफलको बिषय बनाउन नसके पनि जिल्ला वा गाँउपालिका पार्टी कमिटीको राय सल्लाह लिन सक्नु हुन्थ्यो होला नि हैन र? यहि प्रस्तावमा पार्टी कमिटीमा बेवास्था गरेको दिन देखी नै गाँउपालिकामा तपाइ बिरुद्द बिरोधका आवाजहरु बुलन्द हुन थाले। तपाइका बिगतका सहयोगीहरु पार्टी संगठनका योद्दाहरु चुप बस्न बाध्य भए तर बिरोधीहरु सलबलाइ रहे। मैले त्यो बेला खासै यो बिषयलाइ त्यति पेचिलो मानेन किन कि बिचारको हिसावले हामिले एजेन्डा जितेका थियौ सहिदको नाममा गाँउपालिकाको नामाकरण भएको थियो। बिभिन्न आरोह अबरोहका बिच पनि तपाइ सफल हुनु भएको भन्दै मनमनै चित्त बुझाउथे।
जिल्ला सदरमुकाम देखि दुरदराजमा रहेको बिकासका हिसावले पछाडी पारिएको गाँउपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई विशेष जोड दिदै, यातायात, बिजुलि बत्ति, खानेपानि, कृषि लगाएतका विकासका कामहरु र यहाँका जनताहरुलाई सकेसम्म रोजगारीको अवसर प्रदानगरी गाँउपालिकालाई अगाडि बढाउने तपाईंको बिशेष जोड रहेको छ भन्ने महसुस गरेको थिए। गंगादेव गाँउपालिको जनताहरुले तपाईलाई साथ र सहयोग नगरेको भन्न मिल्दैन र भन्दिन पनि तर अहिले तपाईंले गरेको हरेक काममा तपाइकै बहुसंख्यक सहयोगीहरु सन्तुष्ट छैनन, सबै सहपाठी खिन्न हुँदै मौन बस्दै आईरहेका छन्। किन होला कहिले समिक्षा गर्नु भएको छ?
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा तपाईंको बिरोध गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै आएको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा, टोल-टोल, घर छिमेकहरुमा गंगादेव गाँउपालिकाकै बिशेष गरि हजुरको नै नाम तोकेर बिरोध गरेका शब्दहरु सुन्ने तथा सामाजिक संजालमा पढ्ने गरेको छु। गाँउपालिकाको सानो कम्जोरीलाइ लिएर ठुलो मुद्दा बनाई बहस चलाएको विभिन्न ठाउँमा पढ्ने तथा सुन्ने गरेको छु। तर त्यसको प्रतिरक्षा तपाइ बाहेक तपाइका सहकर्मी, सहपाठी, पार्टी प्रतिनिधी, निर्बाचीत जनप्रतिनिधी कसैले गरेको देख्दीन। मैले अलग्गै भन्नु पर्ने केही छैन। मैले भन्नु पर्ने कुराहरु तपाईंले पहिलेनै जानकारी पाईसक्नु भएको छ होला, तर तपाईंले एकपटक गहिरिएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ….।
बिरोध दिनानु दिन किन हुन्छ ? के कारणले हुन्छ? के का लागि हुन्छ? के को लागि भईरहेको छ? मतदाताले के चाहेका छन्? जनतालाई कस्तो परिबेशमा बस्न मन छ? जनताले के खोजेका छन र के पुगेन….? यस्ता यावत कुराहरुको कहिल्यै मनन गर्नु भएको छ? कि तापाई कुनै ब्यक्तिको लहलहैमा चल्दै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने एकपटक राम्ररी सोच्नुहोस् र समिक्षा गर्नुहोस। तपाईलाई कुनै कर्मचारीले त घुमाईरहेका छैनन्? सल्लाह दिनेले कतै तपाइकै कम्जोरीमा खेल्ने मौका पाएका त छैनन? कि गाँउपालिका अध्यक्ष भएकोमा तपाईंलाइ आफैप्रति घमण्ड छ? आफै निति र बिधि बिपरित मनोमानी तवरले शासन चलाउन चाहानुहुन्छ………
‍आजभोलि गाँउमा हल्ला यस्तो छ कि गाँउपालिकामा शिक्षक तपाइका सल्लाहकार हुन रे, गाँउ गाँउमा तपाइ आबद्द पार्टीको संगठन छैनन रे, सत्ता र संगठन सबै आफै भएको तपाइलाइ अत्याधिक घमण्ड छ रे, तपाइको नाममा तपाइका सल्लाहकार शिक्षकहरुले गाँउ गाँउमा पैसा असुल्दै छन रे, तर बिडम्बना उनिहरु नै सत्ताले मनोमानि गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउदै हिडेका छन रे, सुनेको छु दुइ तिहाइको सरकार चलाएकोमा तपाइ घमण्ड गर्नुहुन्छ तर तपाइका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य राम्रोकामको जस आफै लिन्छन बिग्रेको काम तपाइकै नाममा सुम्पन्छन रे, आजभोलि त तपाइ नेतृत्वको वडा अध्यक्षहरुको सामाजिक, सास्कृतिक बिचलनका परिघटनाहरुले सबैको कान गुन्जाएमान बनाएको पनि गाँउमा प्रसस्तै मात्रामा सुन्न पाइन्छ रे, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मनोमानिका प्रसस्त घटनाबाट तपाइ आबद्द संगठनमा बित्रिस्ना जागेको छ रे, तपाइलाइ जिताउने सफल योजनाकारहरु तपाइको काम प्रति असन्तुस्ट हुदै मौनतामा बसेका छन रे………।
तपाइकोलागि आम जनताबाट उठेका माथिका प्रश्न, अफवाह सुन्ने अझै मेरो मनले मानेको छैन। तपाइबाट अझै धेरै अपेक्षा गरेका छौ हामि र हाम्रो यूवा पङ्तिले। एक पटक तपाइ आफै सम्झनुहोस त, तपाइमा के को कमि छ र, शैक्षिक योग्यता हुदै सबै क्षेत्रमा तपाइ अब्बल हुनुहुन्छ, निडर, सबै क्षेत्रमा अब्बल हुदा हुदै पनि तपाइ प्रति यति धेरै बिरोधका स्वरहरु दिनानुदिन बृद्द किन भएको छ? एक पटक फर्केर तपाइका सल्लाहकार, तपाइका सल्लाहकार शिक्षक, पार्टी संगठनका नेतृत्व, राजनैतिक सहकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधीबारे सोच्ने र समिक्षा गर्ने बेला भएन र?
यसै अवस्थामा म बामपन्थि बिचारधाराको हिसावले केही सुझाब दिन चाहान्छु। तपाइका राजनैतिक सहकर्मी प्रर्ति एक पटक फर्केर हेर्नुहोस, अनि पार्टी संगठनलाइ ब्यवस्थित गर्नुहोस। थोरै भएपनि योग्य र निति बिधिमा अडिग बिचारमा अडिग पार्टी प्रतिनिधि सङ सल्लाह लिने गर्नुहोस, तपाइलाइ जिताउने संगठनका साथिहरुबाट एकपटक होइन पटक पटक संस्थागत सल्लाह र निर्णय लिने गर्नुस। पार्टी पहिलो र सत्ता दोस्रो राखी काम गर्नुस। पार्टी संगठनलाइ ब्यक्तिले जित्ने शासक कम्यूनिष्ट हुनै सक्दैन। तपाइ जनताको घर आगनमै रमाउने मान्छे हो रमाउनुहोस तर गलत साथिको संगत गरि नरमाउनुहोस, तपाईं जनताको घर आगनमा पाइला टेक्दै समस्याहरु बुझ्ने, सकेसम्म उत्पन्न समस्या समाधान बिना स्वार्थ गरिदिनुस, यूवा बेरोजगारि हटाउने प्रयासमा योजना निर्माण गर्नुहोस, गाँउपालिकाको प्रवाहहुने सेवामा सबै शाखाहरूबाट जनताको चित्तबुझ्दो काम गर्न आवश्यक सहजिकरण गर्नुहोस, बिधि भन्दा पनि नितिमा स्थानिय सरकार परिपक्क हिसावले बिना स्वार्थ संचालन गरिदिए सबै जनता खुसि र सन्तुष्टी हुने थिए की……. यति भएमा गंगादेबमा पुन कम्यूनिष्टको सरकार दोहोरिन्छ कि? नत्र भन्न सकिने अवस्था छैन …….
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित हजुरको शुभचिन्तक
राजेन्द्र वली “क. राजु “
गंगादेब ३ रोल्पा